कतारमा एकैदिन ५ हजार २ सय ३५ जना डिस्चार्ज, निको हुने अधिकांश नेपाली – Sanchar Patrika
May 31, 2020 243
काठमाडौं, १८ जेठ । कतारमा शनिबार मात्रै ५ हजार २ सय ३५ जना को’रोना संक्रमित निको भएका छन् । निको हुनेमा अधिकांश नेपाली कामदार छन् । कतारको जन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टाको नतिजा अनुसार यो निको हुनेको यो संख्या हालसम्म कै उच्च संख्या हो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
संक्रमितमध्ये १९ देखि ४० वर्षका युवा कामदार रहेकोले निको हुनेको संख्या पनि उच्च देखिएको हो । कतारमा हालसम्म २५ हजार ८ सय ३९ जनालाई निको भइसकेको छ । ‘क्‍वारेन्टाइनमा बसेको ४० दिन पछि निस्कन पाए । दुईपटकको परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आयो । क्‍वारेन्टाइनबाट निस्केर गाडीमा राखिएको थियो ।
म बसेको गाडीमा सबैजना नेपाली थिए,’ बाग्लुङका ३४ वर्षीय एक नेपालीले भने,‘कोरोनालाई जितेर निस्कदा सबैजना उत्साहित देखिन्थे । हामीलाई युद्ध मैदानबाट घर फर्केको जस्तो लागेको छ ।’ निको भएर निस्केकालाई १५ दिनसम्म क्याम्पमै बस्न समेत निर्दे शन दिइएको उनले बताए । ‘यताउता नजानु भनेको छ । कसैलाई नभेट्नु भनेको छ । दुई हप्ता कम्पनीकै क्याम्पमै बस्नेछु,’ उनले भने ।
Prevचीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबिरुद्धको भ्याक्सीन पनि सबै भन्दा पहिले चीनले नै दिने !
Nextलकडाउन उ’ल्लं’घन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका बुवा छोराको प्रहरी हिरासतमै नि’धन भएपछि ….
दशैंमा सबै बैंक बन्द, डिजिटल बैंकिङ र एटीएम सेवा पनि बन्द हुन्छ ? (सूचनासहित)